Fanalalahana ny fifandraisana ara-barotra : “HITARIKA NY FANDROSOANA EO AMIN’NY SAMY TANY AFRIKANINA” -
AccueilRaharaham-pirenenaFanalalahana ny fifandraisana ara-barotra : “HITARIKA NY FANDROSOANA EO AMIN’NY SAMY TANY AFRIKANINA”
Fanalalahana ny fifandraisana ara-barotra : “HITARIKA NY FANDROSOANA EO AMIN’NY SAMY TANY AFRIKANINA”
01/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nifarana omaly, tany Addis-Abeba, Ethiopie ny fihaonana an-tampon’ny vondrona Afrikanina. Maro ny zavatra tapaka nandritra ity roa andro ity, toa ny nahavoafidy ny Filoha Guineanina Alpha Condé, ho filoha vaovao hitantanana ny vondrona. Teo koa ny nahavoafidy ilay Chadianina, Moussa Faki Mohamat ho filohan’ ny vaomiera ny vondrona Afrikanina. Ny firosoana amin’ny fanavaozana ny fitantanana ny vondrona afrikanina ka nahatonga ny fandraisana fepetra maro ho fampandrosoana ny toe-karena afrikanina. Ary farany ny famerenana ny firenena Maroc ao anatin’ny fivondronamben’ny tany Afrika. Fa voaresaka nandritra ny fivoriana tany Addis-Abeba ihany koa ny toe-karena sy ny fampandrosoana ny Afika. Tafiditra amin’izany ny hirosoana lalindalina kokoa ny fanalalahana ara-toekarena, ny fifandraisana ara-barotra sy ny fanalalahana ny fivezivezin’ny afrikanina eo amin’ny samy firenena mikambana. Araka ny fanambaran’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, omaly, tany Addis-Abeba mantsy dia mitondra fampandrosoana aty Afrika izany fa kosa tsy maintsy arahina fepetra.
“Io firaisambe afrikanina io mieritreritra fa tsara kokoa raha havondrona ny herin’ny tany afrikanina rehetra izay misy tany 54, toa izay mbola hizarazara ao anatin’ny vondrom-barotra maro samihafa. Izay no tombontsoan’i Madagasikara, izay mitovy amin’ny tombontsoan’ny rehetra. Izany hoe, mivelatra kokoa ireo tany izay ahazoana manondrana entana sy manafatra entana ihany koa. Koa anatin’izany fanalalahana ara-toekarena izay ny fanalalahana ny fivezivezin’ny olona ao anatin’ilay izy. Mety hitarika fandrosoan’ny fifanakalozana eo amin’ny samy tany Afrikanina, izay tena hampirisihana mihitsy amin’izao fotoana izao satria tsara ho fantatra fa i Afrika dia 3 isan-jato fotsiny no anjarany eo amin’ny tsena iraisam-pirenena amin’izao fotoana izao ary i Afrika dia mbola manafatra na dia ara-tsakafo fotsiny amin’ny tany ivelan’ny Afrika. Lasa hiteraka fampirisihana izay tsy hoe amin’ny sehatry ny fifanakalozana ara-barotra ihany fa hanalalahana ny fifanakalozana ara-barotra dia hitarika aty ambony ny fampirisihana hanalehibiazana ny sehatra ny famokarana. Izay ny tena zavatra ngeza be ao anatin’ilay izy. Ary hahita tombontsoa amin’izany i Madagasikara”, hoy ny Filoham-pirenena, tany Addis- Abeba.
Fa anisan’ny fandaharan’asa lehibe eo amin’ny vondrona Afrikanina ny fampiroboroboana ny olona mampiasa jiro. Araka ny antontan’isa azo, 7 amin’ny olona 10 no tsy manana herinaratra aty Afrika. Vahaolana ny fampiasana ny angovo azo havaozina ary efa misy ihany koa ny mpamatsy vola vonona hanohana ny Afrika, hoy ny Filoham-pirenena malagasy, omaly hatrany. “Io resaka angovo io no olan’izao tontolo izao, olan’ny Afrika rehetra amin’izao fotoana izao. Ny rehetra miara-manaiky amin’izao fotoana izao fa ny fitrandrahana ny angovo azo havaozina ihany no lalana. Efa misy ihany koa ny famatsiam-bola avy any Etazonia izay alefany aty Afrika hanampiana ity kaontinanta ity amin’ny lafin’ny herinaratra. Efa misy tany vitsivitsy aty Afrika efa misitraka izany amin’izao fotoana izao ary heveriny fa ao anatin’izany i Madagasikara.”
Banky Afrikanina ho an’ny Fampandrosoana : Hahazo fanampiana hatrany amin’ny 1 miliara Dolara i Madagasikara
Vola mitentina hatrany amin’ny 1 miliara Dolara no efa fantatra fa homen’ny banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana na ny BAD hanampiana an’i Madagasikara mandritra ny taona 2017 hatramin’ny 2021, ary hiompana amin’ ny fanatsarana ny ...Tohiny
Minisitra Paul Rabary : “Mangataka mba hiarovana ny fianaran’ny zaza Malagasy”
Fanohanana ny fampandrosoana : Nandrotsaka 112 tapitrisa Euros ny Vondrona Eraopeanina